Koowheel 2 taranaka e-skateboard tsoavaly voalohany - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Hi ~ Noho ny Koowheel 2 daty taranaka herinaratra skateboard Kooboard no voalohany herinaratra skateboard eo amin'ny fiainako, ary zara raha mandany vola mba hividianana toy izany lafo kilalao (Ankoatra ny, nividy ny lalana bisikileta miaraka amin'ny "tanjona tsara" ...) izany aho te ho any amin'ny valan-javaboary. Ary mafy be aho mba vita ny mileage fitsapana isan-karazany, taty aoriana dia manazava hoe nahoana no mampalahelo.
Alohan'ny mamaky ny tantara, hizara ny skateboard aloha ny antontan-kevitra ho an'ny boky.
Ny fitambaran'ny entana ny koowheel herinaratra skateboard dia 61.9KG amin'ny vatana lanjany 58.5KG + vatana fitaovana fiarovana 1.6KG + Ultra-kiraro maivana nihazakazaka 0.2KG + 960ml rano + 1Pj finday fanalahidy sy potipoti-javatra 0.6KG.
Ny voalohany diany
Omaly tolakandro, ny toetrandro dia tena mafana, te-haka ny skateboard ny Riverside Park, fa satria ny fianakaviana akaiky loatra sakafo ny fotoana, tsy maintsy mandeha akaikin'ny embankment hanandrana azy io. Tamin'ny takariva, ny Park manana be loatra ny olona, ​​toy izany koa ny haingana sy ny deceleration dia tena matetika, tokony ho tamin'ny 5:30 ora hariva aho dia nahatsiaro ny fianakaviako, tamin'ity indray mitoraka ity dia naka 55 minitra.
Taorian'ny sakafo hariva, dia tsy kivy fanantenana ny handeha indray.
Ary rehefa afaka nanana sakafo hariva niaraka tamin'ny fianakaviako aho ary hiverina any amin'ny Riverside Park amin'ny 9 maraina, tamin'ity indray mitoraka ity ny pedal mitsitaitaika ihany mpihazakazaka, ka milalao Mandehana mafimafy kokoa nandritra ny fotoana kelikely, fotoana handinihana ny manodidina fomba mankafy, tamin'ity indray mitoraka ity mitaingina adiny roa sy sasany .
Tamin'ny hariva, nitsofoka mangingina 10.68KM.
Sivy ora hariva, solafaka ny 28.76KM indray.
Miova kely hantsana, rehefa ny eo ho eo ny haavo dia 26 metatra.
Ny tahirin-kevitra etsy ambony dia ao ny APP "Geo Tracker", ny zanabolana toerany amin'ny fomba mazava tsara. Ny bisikileta Lane tokony ho 2.3 km miaraka amin'ny ankamaroan'ny asfalta rarivato, afa-tsy 50 metatra dia tena tsara loatra iny amin'ny taila (toerana roa Miisa 50 metatra). Aho nandritra ny 3 ora sy 14 minitra (saika rehetra nitsangana teo amin'ny Skateboarding ~ _ ~ "), dia tena mafy dia tena traikefa.
Tamin'ity indray mitoraka ity I ridded 39,44 km feno voampanga bateria ~ ianao tsy nahita izany ratsy, amin'ny iray bateria, fotoana maro aho, te-hiala ho any an-trano, ary avy eo hitsapa indray andro iray hafa, izany no tena ara-dalàna tena fiainana ... ... ... ... (ary rehefa lany ny bateria, ny tanana nanohina ny bateria nivadika ho mangatsiaka, ny maotera ihany micro-mafana, tena tsara ~), Mino aho fa raha tsy mijanona ka mandehana, ny mileage tokony ho avo kokoa, raha misy birao io ihany, dia azonao atao ny manandrana. Tsy tokony ho ela kokoa noho ny efa mitsangana eo an- skateboard .
Nandritra ny rehetra fanodinana, dia maro fiovana eo amin'ny hafainganam-pandeha sy ny nanapaka (ny haingana sy ny deceleration sy ny hafainganam-pandeha isan-karazany azafady manondro ny ambony sary), noho izany dia mihevitra fa tokony ho 20km mileage isan-karazany eo amin'ny fetra (araka ny traikefa, ny mpanamboatra Miaraka matetika fano miampy foana haingana hafainganam-pandeha mba hamarana tsara tarehy angon-drakitra, ka tsy mino). Fa koa noho izany hevitra izany ka dia nanana scruples (mieritreritra aho izay hery tampoka eny, tsy maintsy hanao 7.8 kilao herinaratra skateboard miverina any an-trano).
Ary noho izany dia diso hevitra, ka dia ridded hatramin'ny 12 ora, ny herinaratra dia tena lany ringana. (Izay mahalala ny antontan-kevitra ho voasoratra dia mpandala ny mahazatra ...... .. tena very aho), izany 20km haingana kokoa noho izaho tombanana hafainganam-pandeha 20km. (ity tantara ity dia milaza amintsika, mba hahatsiaro ny hevitry ny hery Asehoy ny jiro teo anatrehan'i milalao ny herinaratra skateboard, ary aza mieritreritra hoe tsy maintsy ho mpanamboatra rehetra mamitaka ").
Laps efatra tamin'izy ireo dia nipetraka tamin'ny skateboard (milalao toy ny U kart rehefa reraka, fa tena lehibe)
Tamin'ny sivy ora ny hafainganam-pandeha ny momba 26.8KM.
Raha fintinina, rehefa afaka izany fitsapana, ny manaraka dia azo raisina ho mpikambana:
Ny mileage ny herinaratra skateboard tena tsara, mpanamboatra manome tahirin-kevitra loatra ny nentin-drazana.
Motor sy ny bateria kalitao tsara, malamalama mitaingina saika tsy superheat.
Ny kodia dia hanafintohina tongotra an-biriky dalana.
Raha misy 12mm vatokely ambanin'ny kodia, ny kodia dia nitsambikina.
Raha misy 5mm vatokely, dia tsy misy fiantraikany ny fanaraha-maso.
Freins maranitra sy saro-pady, masìna ianao, aza manosika mafy loatra, ka manao ny fifantohana Nitady tetika hafa indray mialoha.
Haingana tsara fampisehoana ihany koa, tokony ho mahaliana kokoa rehefa mamoha.
Izany dia tsara hifanaraka amin'ny zava-dalana teo amin'ny gony, ny manovaova ny birao fotsiny mba hahatonga ny kodia mitovana.
Ny mileage ambony sy ny fitsapana hafainganam-pandeha dia nanao tsy mamoha, ary Izaho no hamaha ny hahita ny tena hafainganam-pandehan'ny ny birao manaraka.
Post fotoana: Sep-29-2017